Sida maanta magaalada Muqdisho loogu soo dhaweeyay guddoomiyaha cusub ee midowga Afrika (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sida maanta magaalada Muqdisho loogu soo dhaweeyay guddoomiyaha cusub ee midowga Afrika (SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya soo gaaray wafdi uu hogaaminaayo gudoomiyaha cusub ee midowga Afrika Muuse Faki Maxamed, iyadoona uu halkaasi kusoo dhaweeyay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo saraakiil ka tirsan AMISOM.
Guddoomiyaha ayaa markii uu kasoo degay garoonka Aadan Cadde waxaa loo gudbiyay qeybta nasashada ee garoonka, halkaasi oo uu kulan kula qaatay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Labadaasi dhinac ayaa kulankoodi uga hadlay sidii midowga Afrika uga qeyb qaadan lahayd gar-gaarka loo fidinaayo dadka ay abaaraha ku dhufteen iyo arrimo la xiriira xoojinta ammaanka dalka.
Dhinaca kale, guddoomiyaha oo markii dambe loo gudbiyay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa halkaasi kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Guddoomiyaha ayaa marka hore madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ugu hambalyeeyay guushii uu ka gaaray doorashadii dhawaan dalka ka dhacday, wuxuuna guddoomiyaha ballan ku qaaday in wada shaqeyn dhaw uu la yeelan doonno dowladda federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, labadaasi mas’uul ayaa kulankoodi uga hadlay sidii midowga Afrika uga taageeri lahayd dowladda federaalka Soomaaliya abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale arrimo la xiriira xoojinta ammaanka dalka.
Safarka guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ee magaalada Muqdisho ayaa qeyb ka ah safarada ay magaalada ku imaanayeen mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalalka caalamka tan iyo markii la doortay madaxweyanha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay soo gaareen xubmo uu ka mid yahay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo wasiirka arrimaha dibada ee Britain Boris Johnson.